किन परिवारबाट अलग्गै बस्छन् यी कलाकार ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रियकिन परिवारबाट अलग्गै बस्छन् यी कलाकार ?
किन परिवारबाट अलग्गै बस्छन् यी कलाकार ?
मुम्बई(बलिउड लाइफ)– फिल्मी दुनियाँमा यस्ता कैयौं कलाकार छन्, जो गोपनियताका लागि आफ्नो परिवारभन्दा अलग बस्छन् । जहाँ उनीहरु एकल जीवनमा रमाइरहेका छन् ।अभिनेत्री आलिया भट्टले आफूलाई बलिउडमा स्थापित गरिसकेकी छन् ।
उनी आफ्नो फ्ल्याटमा परिवारभन्दा अलग बसेकी छन् । आलियालाई गोपनियता निकै मनपर्छ । यसका लागि उनले परिवारबाट अलग बस्ने निर्णय लिएकी हुन् ।अभिनेता विक्की कौशल पनि गोपनियतालाई निकै मनपराउछन् । यही कारण उनी पिता श्याम कौशलबाट अलग्गिएर छुट्टै अपार्टमेन्टमा बस्छन् ।
अभिनेत्री कटरीना कैफ धेरै वर्ष अघि मुम्बईमा आफ्ना लागि अलग्गै घर किनेकी थिइन् । त्यही समयदेखि उनी आफ्नो घरमा बस्दै आएकी छन् । उनी परिवारबाट अलग्गिएर बस्न थालेको लामो समय भइसकेको छ ।बलिउडका ‘चकलेडी ब्वाइ’ अभिनेता रणवीर कपूर लामो समयदेखि आफ्नो निजी घरमा बस्दै आएका छन् ।
उनीसँग अभिभावक बस्दैनन् । तर उनको परिवार समय–समयमा रणवीरलाई भेट्न गइरहन्छन् । गत वर्ष उनको पिता ऋषि कपूरको निधन भएको थियो ।फिल्म ‘शेरशाह’ अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्राले बलिउडमा राम्रो सफलता पाइसकेका छन् । उनको मुम्बईमा आफ्नो घर छ । उनी मुम्बईमै रहेका आफ्नो परिवारबाट अलग्गै बस्छन् ।
यी व्यक्तिले सार्वजनिक गरिदिएका थिए मलैका र अर्जुन कपुरको प्रेम सम्बन्धको रहस्य
विश्वभर पछिल्लो २४ घण्टामा साढे ४ लाख बढीमा को’रोना संक्रमण पुष्टि
चीनमा फेरि को’रोनाको प्रकोप‚ सयौँ उडान रद्द र स्कुल बन्द
बन्जीजम्पका क्रममा खुट्टा बाँधिएको डोरी चुँ’डिएपछि ८० फिट तल खसेर महिलाको मृ’त्यु [भिडियो सहित]
जे’लमा छोरालाई भेट्दा शाहरुख खानको हालत देखेर दुनियाँकै आँशु बगे, रि’हाइका लागि मन्दिरमा ७ः१५ बजे आरती
मैले श्रीमतीलाई उडिरहेको विमानबाट समुद्रमा फ्याँ’किदिएँ